Aqalka Sanadka Mareykanka Codsi ku saabsan Donal Trum u gudbiyey Golaha Koongareska | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Aqalka Sanadka Mareykanka Codsi ku saabsan Donal Trum u gudbiyey Golaha Koongareska
Aqalka Sanadka Mareykanka Codsi ku saabsan Donal Trum u gudbiyey Golaha Koongareska
Xisbiga Jamhuuriga ee aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa ka codsanaya Dimuqraadiyiinta inay dib u dhigaan bilowga dacwada xil ka qaadista Madaxweynihii hore Donald Trump illaa bisha Febraayo.
Waxay ku doodayaan in tani ay siin doonto Mr Trump waqti uu ku diyaariyo difaac. Mr Trum Waxaa lagu eedeeyay inuu kiciyay kacdoon kadib markii taageerayaashiisa ay weerareen xarunta baarlamaanka bishan.
Dimuqraadiyiinta Aqalka Wakiilada ayaa diyaar u ah inay dacwadda ku wareejiyaan Golaha Guurtida iyada oo ugunDahmbeyntiina Qorshuhu ui yahay in acwad adag uu wajaho madaxweynihii hore ee Mareykanka Donal J.
Mr Trump wuxuu ayaa u duulay Florida markii waqtigiisu dhamaaday Arbacadii, isagoo ka doiday in uu ka qaybgalo caleemo saarkii Madaxweyne Biydhan iyo Kuxigeenkiisa ms Kamala.
6 Bishaan ayaa madaxweynihii hore ee Mareykaka Donal J waxaa uu Taageera u muujiyey Dibad baxyaal weerar Aqalka Golaha Koongareska ee Magaciisu uu yahay Kabitaal Hill halkaas oo ay ugu yaraantii ku dhinteen 5 Ruux iyada oo Tira kale oo intaasi kabadana ay ku dhaawacmeen. By C/wahaab Aadan C/raxmaan.
Previous articleDowlada Etoobiya oo war ka soo saartay wararka Ciidamada Soomaliya lagu laayey
Next articleWararkii ugu Danbeeyay ee Doorashada Soomaaliya
/wasaare Abay Axmed. Oo ku guuleystay Doorashada dalka ETOOBIYA
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 10, 2021 0
Guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya ayaa goor dhaweyd shaaciyey natiijada doorahada 21-ka bishii June ka dhacday dalka Itoobiya. Wuxuuna guddigu sheegay xisbiga talada dalkaasi...
Ciidamada Xoogga oo uu la socdo General Odowaa Yuusuf Raage ...
Waa kuma ninka Muslimka ah ee noqday qofkii ugu taajirsanaa ee...
Talyaaniga oo u soo baxay koobka Euro 2020 Xalay Markii uu...
Markab ay leeyihiin Ciidamada Badda Mareykanka oo gaaray biyaha Suudaan 10...
Dowladda Malta oo ka xirta xuduudaheeda dhammaan dadka aan...
Dowladda Canada oo dib u dejin siineyso qaxooti Somali...